Hal bil jir - Somali Kidshealth
Hal bil jir
Dhallaanka marka ay jirsadaan hal bil waxay soo gaareen heer korriin oo la wada sugayay. Ilmaha yar xilligaan lama saadaalin karo hurdadiisa waxaa laga yaabaa inuu habbeenkii saacado fiican hurdo. Qaarkood waxay hurdaan labo saac halkii quudinba.
Dadka ku takhakhusay cilmiga hurdada waxay ku talinayaan in dhallaanka gogosha jiifka la geeyo inta aysan gam’in, laakiin ay lulmoonayaan. Taasi waxay ka caawinaysaa ilmaha inuu barto inuu iskiis u gam’o iyadoon la ruxruxin ama aan loo heesin ka hor gama’a.
Naas-nuujinta ama quudinta ilmaha xilligaan carruurtu waxay samaystaan qaab u gaar ah oo ay muujiyaan inay u baahn yihiin in la quudiyo ama naaska la nuujiyo. Hooyooyinka waxaa u fiican inay ilmaha naaska nuujiyaan marka uu ilmuhu dareemo inuu u baahan yahay quudin.
Dhamaan dhaqanada xilligaani waa marka loo diyaargaroobo dhoollo-cadayntii ugu horaysay ee dhallaanku waalidiintiis u muujiyo. Markaan waa marka hooyadu abaalgud ilmaheeda u siiso inay u celiso dhoolo-cadaynta iyo dhunkashada si naxariisi ugu milanto qalbiyada.
Bisha ugu horaysa ee noloshooda dhallaanka waxaa kobca awooda murqaha luqunta oo waxay awoodaan in cabaar madaxooda ay kor u hayaan marka ay calloosha u jiifaan. Sidoo kale, madaxooda labada dhinacba waay u leexin karaan. Waxay dareemaan wajiyada waalidkood, waxay isha la raacaan haddii walax la hor mariyo. waxay dhegta la raariciyaan codadka aadamiga.
Carruurta yar yar ee bil jirka ah si baaxad leh ayay u koraan. Asbuucii 150-200gr oo miisaan ah ayaa jirkooda ku kordha. Caloosha iyo bawdyaha iyo luqunta ayaa ilmuhu ku yeeshaan barruur badan. Haddii ilmahaagu miisaankiisu kori waayo la xiriir dhaqtarkaaga ama isbitaalkaaga. Ogow ilmaha naaska la nuujiyo way ka kori ogyhiin inta badan ilmaha masaasada caanaha lagu siiyo.
Bisha ugu horaysa ilaa asbuuca 6aad waa xilliga ilmuhu gaareen tallaalka cudurada dilaaga ah. La xiriir isbitaalkaaga ama MCHkaaga kuugu dhaw oo ka soo qaado jidwalka tallaalka ilmaha.
Prev3 asbuuc jir
next2 billood jir